Ikhaya>Imisebenzi Yethu>EzokuThutha Emgwaqweni Wezizwe>Ukuhamba ngomgwaqo wasePakistan
Ama-Sohologistics alayisha izimpahla zakho kulo lonke elase China bese athuthela echwebeni le-kashgar e-Xinjiang angena eChina-Pakistan ubungani Highway (KKH) (umgwaqo omkhulu weKarakoram, obizwa ngokuthi yi-KKH noma i-Pamir Highway), ngokudlula komgwaqo we-khunjerab emngceleni we China-Pakistan eningizimu. bese ufika e-Islamabad, inhloko-dolobha yasePakistan ukuze isatshalaliswe kubo bonke abantu basePakistan ngemuva kokuqeda ukukhishwa kwesiko ethekwini laseSost ePakistan.
Hlobo luni lwezimpahla olufanele ukuthuthwa komgwaqo okuya ePakistan?
Okwezimpahla ezingamamitha ayi-2.5 ububanzi namamitha ayi-13 ubude. Ngaphandle kwalokho, ngenxa yethonya lesimo sezulu kanye nokuma komhlaba, isikhathi esivulekile sezithuthi zomgwaqo zakwamanye amazwe iChina-Pakistan sisukela ngo-Ephreli kuya kuLwezi minyaka yonke.
Ungasenza kanjani isimemezelo senkambiso, ukuhambisa inkambiso nokuvunyelwa kwesiko lokuthuthwa komgwaqo okuya ePakistan?
Izinyathelo ngokuvamile kanje:
A. Ukuthuthwa komgwaqo oya ePakistanis ukuyokwenza isimemezelo sokuthumela ngaphandle kwemininingwane efanele yezithuthi zezangaphandle kanye namasiko endawo ngemuva kokulayisha ezimotweni zakwamanye amazwe eSupervised Warehouse.
Ukuhamba ngomgwaqo okuya ePakistan kungamenyezelwa ethekwini elingumngcele ukuze kutholakale amasiko noma endaweni yephrojekthi.
Yimuphi umshini osetshenziselwa ukuthutha umgwaqo omkhulu oya ePakistan?
Kuthiwani ngomthethosivivinywa wokulayishwa kwezithuthi zomgwaqo eziya ePakistan?
Yindlela ye-CMR ekhishwe inyunyana yezokuhamba ngomgwaqo yaphesheya, eye yamukelwa amazwe ase-ASEAN enkabeni ye-Asia nakwamanye amazwe e-CIS. Kubandakanya imininingwane ye-cargos, umthumeli, umgqugquzeli, olingana nomthethosivivinyo wokulayisha